ဂေါက်သီးရိုက်လောင်းကစား | အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS
အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် WebSite.WS
အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အားလုံး > ဂေါက်သီးရိုက်လောင်းကစား
လောင်းကစားများနှင့်နောက်ကျောရောမအင်ပါယာ၏အသက်အရွယ်မှအားကစားရက်စွဲများအတွက်အလောင်းအစားကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနဲ့မဆုတ်မနစ်အားကစားအတွက်ခံစားနေတဲ့အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ . အားကစားအတွက်လောင်းကစားခြင်းအဘေးကနေလန်းဆန်း, ဂိမ်းထဲမှာအနည်းငယ်ဘဝကိုပြန်တတ်၏. ထိုအလောင်းအစားအနိုင်ရသူကိုပိုကောင်းအခမ်းအနားတောင်းဆိုကြောင်းအောင်ပွဲဒါပေမဲ့ဘာမျှမရှိသည်. ဆုရရှိသူဘက်ဒါပေမယ့်လိမ္မာပါးနပ်လူအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ကြွယ်ဝသောတက်အဆုံးသတ်ကြောင်း၎င်း၏ကံကောင်းပါစေ. မျှပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းဂေါက်သီးအပေါ်လောင်းကစားခြင်းဖြင့်ဂေါက်သီးလောင်းကစားတွေ့ကြုံခံစားလိုဆိုရငျဒီမှာအကြောင်းတတ်ပုံကိုအတူသင်တို့အလင်းမယ်လို့အနည်းငယ်အရာဖြစ်ကြ၏. ဂေါက်သီးဂိမ်းအပေါ်လောင်းကစားခြင်းတိုက်ရိုက်ပြုသောအမှုသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲတက်ရောက်နေစဉ်အလောင်းအစားကြောင်းဂေါက်သီးအပေါ်လောင်းကစား၏အခြားသောလမ်းလည်းမရှိရနိုင်. ပြိုင်ပွဲ ostentatious ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကစားသမားများနှင့်အထူးသဖြင့်ကျော်ကြားသူမြားကိုအများကြီးပါဝင်ကြပြီးမှသာအနည်းငယ်ကစားသမားနှင့်၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပါဝင်သောသာမန​​်ဂေါက်သီးဂိမ်းကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်. ထိုပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားသမားတင်းကြပ်စွာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရန်ရှိသည်နှင့်မျှမတို့ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်. ဒါကလူအများစုကိုပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းဂေါက်သီးအပေါ်အလောင်းအစားအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်. ဒီဂေါက်သီးလောင်းကစား၏ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျဂေါက်သီးအပေါ်အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်အခြားလမ်းရှိပါတယ်. တရှိပါတယ်ဟုခေါ်သည် 72 အလောင်းအစားတွင်း. ကစားသမားချပြီးတစ်ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ 72 တွင်းနှင့်ဆုရှင်အများဆုံးရမှတ်များနှင့်အတူတဒါပေမယ့်နိမ့်ဆုံးရမှတ်တွေနဲ့တမကထူးဆန်းလုံလောက်! အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲရန်သူတို့အပျေါမှာအလောင်းအစားနိုင်နှင့်ဆုရှင်အမြဲအဆုံး၌ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်. ဂိမ်းထားလိုက်တော့အဲဒီမှာလည်စည်းထဲမှာကုန်ဆုံးသည့်အခါတစ်ဦးဆုရှင်ဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဤအဂိမ်းများကိုအမြဲပိုကောင်းဘို့အာကာသရှိသည်. ပိုကောင်းစိတ်ပျက်စရာရင်ဆိုင်ဖို့ရန်မလိုပါ. အဲဒီမှာအခွအေနလျှင်ပွဲစဉ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရှေ့မှာဖျက်သိမ်းရရှိကြောင်းသို့သော်နေဆဲနေဆဲ 72 တွင်းအဘယ်သူမျှမဆုရှင်ရှိပါတယ်ပြီးစီးလျက်ရှိ. အားလုံးပိုကောင်းသူတို့၏ကစားနည်းကိုစှနျ့လှတျဖို့ရှိသည်. ဂေါက်သီး၏ဒီဂိမ်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာကစားသည်. putted ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးတွင်း၏နံပါတ်များတွေအများကြီးကွဲပြားခြားနား. ထိုအဖြစ်ကစားခဲ့ကြောင်းသာမန်ဂိမ်း 18 တွင်းပွဲစဉ်ကျော်ကြား. လူတွေကဒီတစ်ခုအပေါ်အလောင်းအစားကရိုးရိုးလေးကျော်နိမ့်ဆုံးရမှတ်သူကစားသမားမိန့် 18 တွင်း. အခြားဂိမ်းကျော်ဂေါက်သီးအတွက်အလောင်းအစား၏အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျ ပို. ကျွမ်းကျင်ကစားသမားများအတွက်အလောင်းအစားလျှင်အနည်းငယ်သာအခန်းကဏ္ဍကံဤသို့ဒီဂိမ်းထဲမှာကစားများနှင့်လည်းမရှိ, ဆုံးရှုံးများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်. ဂေါက်သီးရိုက်လောင်းကစား
· ကျေးဇူးပြု!! ဝေမျှမယ်အခမဲ့!!
･ Golf Betting
[ဒီ Post ကိုရန် Link ကို (HTML code တွေဟာ)]
[URL ကို Trackback]
မှတ်ချက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ် - သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
Posted by ကို: အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
categories: အားလုံး, ဂေါက်သီး, ဂေါက်ဂိမ်း, ဂေါက်လှည့်လည်, ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ, နိုင်ပြီ, အားကစား Tags:: အကွောငျး, appointment, လောင်းကစားဝိုင်း, ဂိမ်း, ဂိမ်း, ဂေါက်သီး, golf game, golf tour, golf tournament, အသက်, အကွောငျး, အိုမန်, လူထု, ငှားရန်, rich, နိုင်ပြီ, အားကစား, အားကစား, အနိုင်ရ, အလုပ်
စာပို့ (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ) (လိုအပ်)
လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးတိုင်းဘတ်ဂျက် suite ရန်
အပျော်ဖောင်စီးခြင်းအဆိုပါမြစ်ကြောင်း Rapids ၏အခြေခံ
လိဂ်တစ်ခုမှာလောင်းကစားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း –9ဧပြီလ 2006
သင်ကအားကစား Handicapper မရှိရင် Handicapped Are?
4 အ Long က Hitter Beat ရန်နည်းလမ်းများ
အီတလီ: ရဲတပ်ဖွဲ့ Play မဟုတ် “Poker Sportivo”
အဆိုပါက Short ဂေါက်သီး Shot – နှစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးစည်းကမ်းများ
အောင်မြင်သောကစားသမား၏ဂေါက်သီး Swing လျှို့ဝှက်ချက်များ
က Tiger Woods
ဂေါက် Tee (5)
PGA ဂေါက်ကွင်း (5)
ဘေ့စဘော Play (1)
ဂေါက် Play (53)
Pro ကိုဂေါက် (2)
Pro ကိုစကိတ်စီး (1)
S ကအားကစား (60)
ရေးအဖွဲ့ Play စ (6)
သင်း Play (2)
က Tiger Woods (34)
GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
အာဖဂန်နစ္စတန် | အာဖရိကတိုက် | အယ်လ်ဘေးနီးယား | အယ်လ်ဂျီးရီးယား | အင်ဒိုရာ | အင်ဂိုလာ | ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ | အာရပ် | အာဂျင်တီးနား | အာမေးနီးယား | သြစတြေးလျ | သြစတြီးယား | အဇာဘိုင်ဂျန် | ဘဟားမား | ဘာရိန်း | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | ဘာဘေးဒိုးစ | ဘယ်လာရုစ် | ဘယ်လ်ဂျီယံ | ဘေလီဇ် | ဘီနင် | ဘူတန် | ဘိုလီးဗီးယား | ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား | ဘော့ဆွာနာ | ဘရာဇီး | ဘူလ်ဂေးရီးယား | Burkina Faso | ဘူရွန်ဒီ | ကမ္ဘောဒီးယား | ကင်မရွန်း | ကနေဒါ | ကိပ်ဗာဒီ | ချဒ် | ချီလီ | တရုတ်နိုင်ငံ | ကိုလံဘီယာ | ကော်မ္မရိုဇ့် | ကွန်ဂို | ကော့စတာရီ | ခရိုအေးရှား | ကျူးဘား | ဆိုက်ပရပ်စ် | ခကျြခကျြ | ချက်သမ္မတနိုင်ငံ | Darussalam | ဒိန်းမတ် | ဂျီဘူတီနိုင်ငံ | ဒိုမီနီကန် | ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ | အရှေ့တီမော | အီကွေဒေါနိုင်ငံ | အဲဂုတ္တုပြည်၌ | အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | အီရီထရီးယား | အက်စ်တိုးနီးယား | အီသီယိုးပီး | ဖီဂျီ | ဖင်လန် | ပြင်သစ် | ဂါဘွန် | ဂမ်ဘီယာ | ဂျော်ဂျီယာ | ဂျာမနီ | ဂါနာ | ဗြိတိသျှ | ဗြိတိသျှ(ဗြိတိန်နိုင်ငံ) | ဂရိနိုင်ငံ | နေးဒါ | ဂွာတီမာလာ | ဂီနီ | ဂီနီဘစ် | ဂိုင်ယာနာ | ဟေတီ | ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ဟောင်ကောင် | ဟန်ဂေရီ | အိုက်စလန် | အိန္ဒိယ | အင်ဒိုနီးရှား | အီရန် | အီရတ် | အိုင်ယာလန် | ဣသရလေ | အီတလီ | အိုင်ဗရီကို့စ် | ဂျမေကာ | ဂျပန် | ယော်ဒန်မြစ် | ကာဇက်စတန် | ကင်ညာ | ကီရီဘာတီ | ကိုဆိုဗို | ကူဝိတ် | ကာဂျစ္စတန် | လာအိုနိုင်ငံ | လတ်ဗီးယား | လေဗနုန်တော | လီဆိုသို | လိုင်ဘေးရီးယား | လစ်ဗျား | လီချင်စတိန်း | လစ်သူ | လူဇင်ဘတ် | မကာအို | မက်ဆီဒိုးနီးယား | ဒါဂတ်စကာ | မာလာဝီ | မလေးရှား | မော်လ်ဒိုက် | မာလီ | မော်လ်တာ | မာရှယ် | မာတီနစ် | Mauritania | မောရစ်ရှ | မက္ကစီကို | Micronesia | မော်လ်ဒိုဗာ | မိုနာကို | မွန်ဂိုလီးယား | မွန်တီနီဂရိုး | မော်ရိုကို | မိုဇမ်ဘစ် | မြန်မာ | နမီးဘီးယား | Nauru ကျွန်း | နီပေါ | နယ်သာလန် | Neves သြဂတ်စနေးဗစ် | နယူးဇီလန် | နီကာရာဂွာ | နိုင်ဂျာ | နိုင်ဂျီးရီးယား | မြောက်ကိုရီးယား | မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် | မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်(ဗြိတိန်နိုင်ငံ) | နော်ဝေ | အိုမန် | ပါကစ္စတန် | ပလောင်း | ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကို | ပနားမား | ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ | ပါရာဂွေး | ပီရူး | ဖိလစ်ပိုင် | ပိုလန် | ပေါ်တူဂီ | Puerto Rico | ကာတာနိုင်ငံ | ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း | ရိုမေးနီးယား | ရုရှားနိုင်ငံ | ရဝမ်ဒါ | စိန့်လူစီယာ | ဆာမိုအာ | ဆန်မာရီနို | စဝ်တုန်နှင့်ပရ | ဆော်ဒီအာရေဗျ | ဆီနီဂေါ | ဆားဘီးယား | seychelles | ဆီယာရာလီယွန် | စင်္ကာပူ | ဆလိုဗက်ကီး | ဆလိုဗေးနီး | ရှောလမုန်သည် | ဆိုမာလီယာ | တောင်အာဖရိက | တောင်ကိုရီးယား | စပိန် | သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ | ဆူဒန် | ဆူရာနမ် | ဆွာဇီလန် | ဆွီဒင် | ဆွစ်ဇာလန် | ဆီးရီးယားအာရပ် | ထိုင်ဝမ် | Tajikistan | တန်ဇန်းနီးယား | ထိုင်းနိုင်ငံ | သွားရန် | Tonga | ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို | တူနီးရှား | ကြက်ဆင် | တာ့ခ်မင်နစ္စတန် | Tuvalu အဘိဓါန် | ယူအက်စ်အေ | ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ | ဗြိတိန်နိုင်ငံ | ယူကရိန်း | အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း | ယူနိုက်တက်စတိတ် | ယူနိုက်တက်စတိတ်(ယူအက်စ်အေ) | ဥရုဂွေး | ဥဇဘက် | ဗာနူအာ | ဗာတီကန် | ဗင်နီဇွဲလား | ဗင်နီဇွဲလား Bolivar | ဗီယက်နမ် | ဗင်းဆင့် | ယီမင် | ဇမ်ဘီယာ | ဇင်ဘာဘွေ | GDI | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒိုမိန်းအင်တာနေရှင်နယ်, Inc မှ. | GDI Signup ဘာသာစကားများလက်စွဲစာအုပ် - GDI အကောင့် Setup ကိုဘာသာစကားများလမ်းညွှန် | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS ဒိုမိန်း | .WS ဒိုမိန်း Affiliate | dot-WS ပူဖောင်း | dot-com ပူဖောင်း | dot-WS စန်း | dot-com စန်း | ဘဝအဘို့အဝင်ငွေခွန် | GDI ကမ္ဘာမြေက်ဘ်ဆိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာမြေက်ဘ်ဆိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများက်ဘ်ဆိုက် |
မှပံ့ပိုးသည် အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ